काठमाडौं- आज मंसिर ४ गते सोमबार कहाँ के- के भयो? अब थाहा पाउनुहोस्, नेपाल समयको दिनभरी।
संसदीय समितिले सोध्यो : वाइड बडी किनेको कि भाडामा ?
नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका दुर्इवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको हो वा भाडामा भन्‍ने बारेमा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।
राष्ट्रपतिको १८ करोडको गाडी प्रकरणमा लेखा समितिले छानबिन गर्ने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि सरकारले खरिद गर्न लागेको १८ करोडको बिलासी मोटर खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। यति महंगो गाडी लिनुपर्ने कारण र औचित्यबारे समितिमा प्रश्न उठेपछि यसमा छानबिन गर्न लागिएको हो।
राजापा संयोजक फेरियो, नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र महतो
अख्तियार र प्रहरीको टोलीले कार्यलय प्रमुखलाई घुससहित पक्राउ गरेको मुचुल्का तयार गर्दै थिए। जनप्रतिनिधी र अख्तियार तथा प्रहरी अधिकृतहरुले मुचुल्का तयारी गराईरहँदा न्यायाधिवक्ता कोषहरी निरौलाको अनुहारमा भने कुनै डर र त्रास देखिएको थिएन।
विराटनगर विमानस्थलमा माउन्टेन फ्लाइटको ट्रायल
नेपालको क्षेत्रीय विमानस्थल र प्रदेश १ को मुख्य विमानस्थल विराटनगर विमानस्थलबाट माउन्टेन फ्लाइटको ट्रायल हुने भएको छ। विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले आगामी शनिबार माउन्टेन फ्लाइटको तयारी भएको बताए।
नौ महिना : मनमोहनको त्यो अल्पमत, ओलीको यो दुई तिहाई
२०५१ साल मंसिर १४ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। त्यो मन्त्रिपरिषद्‌मा गृहमन्त्री थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
क्‍याम्पसको जग्गा किर्ते गर्ने पुजारी पक्राउ
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा मठमन्दिर तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरिनु सामान्य मानिन थालिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहर जनकपुरस्थित विभिन्न मठमन्दिर र गुठीका जग्गाहरु वर्षौंदेखि अतिक्रमण भइरहँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन बसेपछि सामान्य झैँ लाग्न थालेको छ।
‘अपराधमुक्त समाज’ संस्थाको नाममा ठगी गर्ने अनिलकुमार र नितु पक्राउ
प्रहरीले ‘अपराधमुक्त समाज’ नामक संस्था खोलेर सर्वसाधारणसँग ठगी गरेको आरोपमा जनकपुरबाट सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ।
‘सूचना लुकाएर सरकारले संविधान कुल्चियो’
नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनल (डिएलए) ले सरकारले सूचना लुकाएर आफैँ संविधान कुल्चिएको आरोप लगाएको छ।
सवारी दुर्घटनामा परी अभिनेता विपीन कार्की घाइते
अभिनेता विपीन कार्की सवारी दुर्घटनामा परी घाइते भएका छन्। आज बिहान पौने आठ बजेतिर बालाजुतर्फ जाँदै गरेको कार्की सवार मोटरसाइकललाई विपरित दिशाबाट आएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा कार्की दुर्घटनामा परेका हुन्।
युइएफए नेसन्स लिग : पोर्चुगल र पोल्याण्ड भिड्दै
युइएफए नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत आज (मंगलबार) राति पोर्चुगल र पोल्याण्ड भिड्दै छन्। यी दुई टोली नेसन्स लिगको समूह चरणको अन्तिम खेलमा भिड्न लागेका हुन् । खेल आज राति पोर्चुगलको घरेलु मैदानमा नेपाली समय अनुसार ठीक १:३० बजेबाट सुरु हुनेछ।
सन्दिप पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) टी-२० क्रिकेट खेल्ने भएका छन् । मंगलबार भएको अक्सनमा सन्दिपलाई पीएसएल क्लब लाहोर कलन्दरले किनेसँगै उनी पिएसएल खेल्ने भएका हुन्।
साउदी राजाले किन गरे अदालतको प्रशंसा?
साउदी अरबका राजा मोहम्मद बिन सलमानले अदालतको प्रशंसा गरेका छन्। राजधानी रियादमा राजा मोहम्मदले सोमबार आफ्नो देशका पत्रकार जमाल खशोज्जीको हत्यामा साउदी युवराजको संलग्नता रहेको आरोप लगिरहेका बेला अदालतको प्रशंसा गरेका हुन्।